Tag: passive data | Martech Zone
Inona no ho avin'ny fanangonana tahiry Passive?
Talata, Novambra 3, 2015 Alarobia, Novambra 4, 2015 Douglas Karr
Na dia ny mpanjifa sy ny mpamatsy aza dia mitanisa ny fanangonana tahiry pasifika ho loharanom-pahalalana hatrany amin'ny mpanjifa, ny roa ampahatelony kosa milaza fa tsy hampiasa data passive roa taona manomboka izao. Ny fikarohana dia avy amin'ny fikarohana vaovao nataon'ny GfK sy ny Institute for International Research (IIR) amin'ireo mpanjifa sy mpamatsy fikarohana tsena 700 mahery. Inona no atao hoe Passive Data Collection? Ny fanangonana angon-drakitra pasif dia ny fanangonana ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fitondran-tenany sy ny fifandraisan'izy ireo nefa tsy mavitrika